Coronavirus oo ‘faraj’ u furay kalluumaysatada Kenya – Radio Baidoa
Guud ahaan qaaradda Afrika, fayraska Corona ayaa culays ku keenay dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah, waxaana joogsaday inta badan ganacsiyada. Balse waxaa jira dad ka faa’iiday cudurkan caalamka saameeyay.
Tusaale ahaan, ganacsatada kalluunka fresh-ka ah ee dalka Kenya ayaa faa’iido badan ka sameeyay baahidda ay shacabka u qabaan hilibkaasi cad, kadib markii la joojiyay kalluunkii laga soo dhoofin jiray Shiinaha.
Kalluumaysata xeebta Dunga ee harada Victoria ayaa waxaa si wanaagsan ugu kala socda ganacsigooda kalluunka. Sicirka kalluunka ee Dunga ayaa sare u kacay boqolkiiba 40 labadii todobaad ee la soo dhaafay, sababtuna waa fayraska Corona.
Waxaa yaraaday kalluunka laga soo dhoofin jiray dalka Shiinaha oo ah halka uu cudurka ka bilowday. Dadkuna waxa ay walaac ka qabaan iibsashada wax kasta oo uga yimaada dalkaasi, Labadaasi arimood ayaa sare u qaaday baahidda loo qabo kalluunka laga soo dabo harada.
“Kalluumaysata harada Victoria ayaa hadda ah kuwo faraxsan, sababtoo ah waxa ay helayaan macaamiil badan. Xeebta Dunga ayaa hadda ah meel ay aad usoo buux dhaafiyeen dadka ku nool magaalada Kisumu ee doonaya kalluunka fresh-ka ah, waayo dadka waxa ay cabsi ka qabaan kalluunka laga keeno Shiinaha fayraska Corona awgii,” ayuu Maurice Misodhi oo ah madaxa maamulka xeebta Dunga.
Kahor inta aanu dillaacin fayraska Corona, kalluumaysata maxalliga ah ayaa la daallaa dhacay suuq u helidda kalluunkooda. Kalluunka laga soo dabo harada ayaa laba-laab ka qaalisanaa kan laga soo dhoofin jiray Shiinaha. Taasi ayaa dhalisay in kalluumaysata ay qiimo aad u jaban ku iibiyaan kalluunkooda ama ay guryahooda geystaan si halkaa loogu cuno.
Hase yeeshee Jackline Nyaboro oo kalluunka ku iibisa Dunga ayaa sheegaysa in hadda ay macaamiisheeda doonayaan inay kalluunka ka iibsadaan qiimo kasta oo uu yahayba.
“Fayraska Corona awgii, dadka iibiya kalluunka Shiinaha ayaa khasaaro la kulmay, sababtoo ah si caadi ah uma wadi karaan ganacsigooda. Maadaama aan kamid ah ganacsatada kalluunka harada, fursad gaar ah ayaan hadda haystaa oo waxaan ku iibin karaa qiimaha aan doono,” ayay tiri Jackline.
Kenya ayaa sanadkii 2018 dalka Shiinaha ka soo dhoofsatay kalluun la qallajiyay oo qiimihiisu dhan yahay 23 milyan oo dollar.
Ganacsatada kalluunka ee harada Victoria ayaa in badan ka cawday kalluunka raqiiska ah ee laga soo dhoofiyo Shiinaha iyagoo sheegay inuu dhulka la galay ganacsatada maxalliga ah.
Kalluunka Shiinaha ayaa boqolkiiba 50 haystay suuqa Kenya, balse tiradaasi ayaa aad hos ugu dhacday tan iyo markii uu bilowday fayraska Corona.
Hase yeeshee arintaasi ayaan war wanaagsan u ahayn dadka oo dhan. Qiimaha sare ee kalluunka maxalliga ah ayaa hoos u dhigay faa’iidada ay helaan ganacsatada tafaariiqleyda ah sida Caroline Ochieng oo kale.
“Maadaama aan kamid ah haweenka kalluunka Shiinaha ku iibiya Kisumu, qiimo jaban ayaan ku helnaa, balse marka la soo dhoofin waayo, waxaan iibsannaa kalluunka haradeena oo ah miid qiimihiisu sarreeyo. Waa taas sababta aan u dooneyno inaan u helno kalluunka Shiinaha laga soo waarido iyo weliba kan laga soo dabo haradeenna si aan u dareemin culeyska ganacsiga,” ayay tiri Caroline.
Kalluunka Shiinaha ayaan Kenya la keenin tan iyo bishii November 2019. Waxaa jirta cabsi ah in kalluumaysata maxalliga ah ay haqab-tiri waayaan baahidda sii kordheysa ee bulshadu u qabto hilibkaasi cad. Balse xilligan waxa ay ku faraxsan yihiin faa’iidada wanaagsan ee ay helayaan.
Madaxweynaha Jupaland oo tacsiyo udiey shacbka iyo maamulka Putland kuna Baaqey In loo midoobo la Dagaalanka Alshabaab